Tottenham Oo Wakhti Dambe Garaacday Southampton Iyo Kane Oo Khasaariyey Rikoodhe
HomeLIVE MATCHESTottenham Oo Wakhti Dambe Garaacday Southampton Iyo Kane Oo Khasaariyey Rikoodhe
Delle Alli laba gool oo uu dhaliyey ayaa Tottenham ku sugay halganka ay ugu jirto inay horyaalka Premier League kaalmaha hore ka gasho si ay uga qayb-geli karto Champions League xili ciyaareedka dambe, kaddib markii ay 4-1 ku garaacday Southampton oo gurigooda ay ku booqatay.
Southampton ayaa daqiiqaddii labaad ee ciyaarta gool la hormartay, kaas oo uu madax ugu dhaliyey difaacyahanka ay kooxaha Ingiriisku dagaallamayaan ee Virgil van Dijk oo kubbad ka helay James War-Prowse, laakiin kooxda martida ahayd ayaa badhtamaha qaybta hore uu Allai u dhaliyey goolka barbar-dhaca oo ahaa kubbad uu ka helay Moussa Sissoko oo uu madaxa sii raaciyey, sidaana ku daba-mariyey Fraser Forster.
Qaybta labaad markii la isugu soo noqday ee ay maraysay daqiiqaddii 52aad ayuu Harry Kane kubbad ka helay Christian Eriksen oo koorne soo laagay, kaddibna inta uu madaxa Kane ku hubsaday ayuu ku ruxay shabaqa Southampton oo lagu naanayso Saints.
Harry Kane oo muddo dheer oo dhaawac ah kaddib, la soo qabsanaya gool-dhalinta oo uu u ekkaa inuu iloobayo, ayaa loo dhigay rikoodhe, laakiin waxa uu toogtay cirka, natiijada ciyaartana waxba kama uu beddelin, illaa ay Son Heung-min iyo Delle Alli laba gool oo wakhti yar u dhexeeyo ay natiijada ciyaarta kaga dhigeen 4-1.
Tottenham ayaa waxay guushani u saamaxday inay yeelato 36 dhibcood, iyadoo hal dhibic ka hoosaysa Arsenal oo kaalinta afraad fadhida.